Ahoana ny fomba hanampiana tenimiafina firmware amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Justo ny talata lasa teo Hitanay ny fomba ahafahantsika manampy teny miafina amin'ny Mac mba hisorohana ny rafitra tsy hivezivezy amin'ny fitaovana fitehirizana anatiny na ivelany hafa ankoatry ny kapila boot namboarina na hidio saika ny fitambarana fitendry rehetra amin'ny boot system toy ny mahazatra: Command-R, Option-Command (⌘) -PR, Command-S, sns.
Ny teny miafin'ny firmware dia fiarovana fanampiny ahafahanao manafina ny boot disk amin'ny FileVault mba hahafahan'ireo mpampiasa manana fidirana amin'ny Mac ihany no mahazo miditra amin'ny fampahalalana ao anaty disk ary raha tamin'ny talata dia nahita ny fomba hanampiana an'ity tenimiafina ity izahay manontany foana, anio dia ho hitantsika ny fomba hanampiana an'ity tenimiafina ity ihany fa amin'ny fampiasana tokana.
Ahoana ny fametrahana kaody firmware iray indray mandeha
Amin'ity tranga ity dia ny tokony hataontsika dia mampiasa maody very na Find My Mac hanidy lavitra ny Mac anao amin'ny kaody firmware iray indray mandeha. Noho izany dia mila miditra isika iCloud.com avy amin'ny solosaina hafa na misintona ny fampiharana Karohy ny iPhone-ko ho an'ny iPhone, iPad na iPod touch.
Raha vantany vao vita, ny Mac dia hahazo ny toromarika hidin-trano iCloud, hamerenana ary hangataka ny kaody PIN hidin-trano noforoninay. Rehefa mampiditra ny kaody isika, ny boot an'ny Mac avy amin'ny kapila voatondro ary mampandeha ilay kaody noho izany dia efa ananantsika ny teny miafin'ny rindrambaiko indray mandeha. Ny maody very dia miasa na dia amin'ny tenimiafin'ny firmware aza. Tsy toy ny kaody maody very, ny teny miafin'ny firmware dia mijanona hatrany mandra-panaisanao azy amin'ny Firmware Password Utility.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanampiana tenimiafina mikirao praogramanao amin'ny Mac Fampiasana tokana
Apple dia mahazo kely amin'ny HomePod fa tsy amin'ny fitaovana hafa amin'ny orinasa